Korean News – Taung Gyi
Han Sohee ကReal life မှာတကယ်ကိုနွေးထွေးတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့Fan တစ်ယောက် Fan တစ်ယောက်ဟာHan Sohee နဲ့အပြင်မှာတွေ့ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ်။မတ်လ(၂)ရက်နေ့ကFan တစ်ယောက်ကHan Sohee ကိုစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာတွေ့ခဲ့တဲ့သူမရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြဖို့online မှာစုဝေးခဲ့ပါတယ်။ Fan က“ဒီနေ့ငါHan Sohee ကိုစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာတွေ့ခဲ့တယ်။တကယ်လို့သူမအစားစားနေချိန်စကားသွားပြောလိုက်ရင်ရိုင်းရာကျမယ်လို့တွေးခဲ့တယ်။သူမအစားအသောက်ကောင်းကောင်းစားနေတုန်းကသူမအတွက်စာတစ်စောင်ရေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ငါ့မှာစာရွက်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်tissue ပေါ်မှာပဲရေးခဲ့တယ်” လို့တင်ခဲ့ပါတယ်။ Han Sohee ကသူမရဲ့စာကိုနွေးထွေးစွာလက်ခံခဲ့ပါတယ်။သူမကဆက်ပီး“Unnie လဲစာရွက်တစ်ရွက်မှရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။Han Sohee ကစားသောက်ဆိုင်ကိုတောင်မေးလိုက်သေးတယ်။သူမကဒီလိုကိစ္စအသေးလေးကိုတောင်ကျော်မသွားပဲစာရွက်အပိုင်းအစကိုရှာနေခဲ့တာပါ။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲစာရွက်ကိုမရခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့sign ထိုးထားတဲ့tissue ကိုပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Fan …
Han Sohee ကReal life မှာတကယ်ကိုနွေးထွေးတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့Fan တစ်ယောက် Read More
Fan တွေအမြဲတမ်းvote ပေးလေ့ရှိကြတဲ့အလှဆုံးကိုးရီးယားမင်းသမီး(၂၀)ယောက် နာမည်ကြီးကိုးရီးယားအနုပညာလောကရဲ့အခန့်ညားဆုံးမင်းသားတွေကိုKingChoice website မှာvote ပေးခဲ့ပီးနောက်အလှဆုံးမင်းသမီးတွေကိုလဲvote ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာvote ပေးခဲ့ပီးနောက်result ထွက်ခဲ့ပါပီ။ဒါကတော့Fan တွေvote ပေးခဲ့တဲ့အနုပညာလောကထဲကအလှဆုံးမင်းသမီးအယောက်(၂၀)ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 20. Moon Chae Won 19. Han Ye Seul 18. Lee Yo Won 16. Han Ga In 15. …
Fan တွေအမြဲတမ်းvote ပေးလေ့ရှိကြတဲ့အလှဆုံးကိုးရီးယားမင်းသမီး(၂၀)ယောက် Read More
Sooyoung အတွက်‘Right Man’ ဖြစ်လာဖို့သူ့ကိုယ်သူပြောင်းလဲပြင်ဆင်နေဆဲလို့ပြောခဲ့တဲ့Jung Kyungho Jung Kyungho ကတကယ်ကိုsweet ဖြစ်တဲ့ယောကျာ်းတစ်ယောက်ပါ။မေလ(၁၇)ရက်နေ့ကrapper Outsider ကTBS FM’s radio ထုတ်လုပ်မှုမှာအထူးဧည့်သည်အဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။Outsider ဟာJung Kyungho ရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။Jung Kyungho ကတော့Girls’ Generation Sooyoung ရဲ့နှစ်တွေအကြာကြီးတည်မြဲနေတဲ့ချစ်သူပါ။ စကားပြောနေစဉ်အတွင်းBJ ကJung Kyungho နဲ့Sooyoung တို့လက်ထပ်ကြမဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပီးတစ်ခုခုများသိလားလို့Outsider ကိုမေးခဲ့ပါတယ်။သူက“ငါ့အတွက်တော့ရိုးသားစွာပြောရရင်သူတို့ခုချိန်ထိလက်မထပ်သေးတာကိုတကယ်အံ့ဩနေတာပါ။သူတို့ဟာအတူတူဆိုအရမ်းကြည့်ကောင်းပီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လဲအရမ်းချစ်ကြပါတယ်” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူကဆက်ပီး“သူတို့ဟာdate …
Sooyoung အတွက်’Right Man’ ဖြစ်လာဖို့သူ့ကိုယ်သူပြောင်းလဲပြင်ဆင်နေဆဲလို့ပြောခဲ့တဲ့Jung Kyungho Read More
Netizen တွေရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဘယ်ရှုထောင့်ကကြည့်ကြည့်perfect ဖြစ်တဲ့မျက်နှာပိုင်ရှင်များ
Netizen တွေရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဘယ်ရှုထောင့်ကကြည့်ကြည့်perfect ဖြစ်တဲ့မျက်နှာပိုင်ရှင်များ သူတို့ဟာဘယ်လိုရှုထောင့်ကကြည့်ကြည့်အဆင်မပြေဖြစ်မှာကိုမစိုးရိမ်ကြပါဘူး။Camera ပေါ်ကphoto တွေကcelebrity တွေအတွက်အရေးကြီးသလိုသာမန်လူတွေတောင်photo ရိုက်ရင်angle တွေကိုအရမ်းသတိထားရတာပါပဲ။လူတစ်ယောက်ကphoto မရိုက်ခင်သူတို့သဘောကျတဲ့angle ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှာလို့ရပေမဲ့cele တွေကတော့မလှတဲ့angle ကphoto တွေကိုတစ်ခြားသူကရိုက်မိသွားရင်ပြန်ဖျက်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီcelebrity (၇)ယောက်ကတော့ဘယ်လိုangle ကရိုက်ရိုက်ကြည့်ကောင်းကြသလိုphotographer တွေကလဲphoto ကောင်းတွေထွက်ဖို့သူတို့အတွက်စိတ်မပူရပါဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီ(၇)ယောက်ကိုတော့netizen တွေကရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပါ။ Lee Hyori Han Hyojoo EXO’s Sehun Park Bogum Min Hyorin Song …
Netizen တွေရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဘယ်ရှုထောင့်ကကြည့်ကြည့်perfect ဖြစ်တဲ့မျက်နှာပိုင်ရှင်များ Read More
မတူထူးခြားတဲ့Language Skill တွေရှိကြတဲ့ကိုးရီးယားအနုပညာရှင်များ
မတူထူးခြားတဲ့Language Skill တွေရှိကြတဲ့ကိုးရီးယားအနုပညာရှင်များ ကိုးရီးယားidol တွေနဲ့အနုပညာရှင်အများစုဟာဒီလိုအရည်အချင်းတွေရှိကြသူတွေပါ။ဒါပေမဲ့ဒီlist ထဲကသူတွေကတော့တစ်ခြားအများစုနဲ့ကွဲပြားတဲ့language skill တွေတတ်မြောက်ထားသူတွေပါ။ W24’s Howon W24 ကHowon ဟာChile မှာမွေးဖွားခဲ့ပီးအသက်(၁၉)နှစ်အထိChile, Venezuela နဲ့Peru တို့မှာနေထိုင်ခဲ့သူပါ။သူဟာKorean နဲ့English ကိုလဲကျွမ်းကျင်စွာပြောတတ်ပါတယ်။ Moon Gayoung မင်းသမီးMoon Gayoung ကတော့Karlsruhe, Germany မှာမွေးဖွားခဲ့ပီးသူမမိသားစုတောင်ကိုးရီးယားကိုမပြောင်းခင်၁၀နှစ်လောက်အဲဒီမှာနေခဲ့သူပါ။‘Foodvengers’ ရဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာဂျာမန်လူမျိုးcustomer နဲ့စကားပြောနေတာတွေ့ရမှာပါ။ Sandara Park …
မတူထူးခြားတဲ့Language Skill တွေရှိကြတဲ့ကိုးရီးယားအနုပညာရှင်များ Read More
K-Drama Fan တွေနောက်တစ်ခေါက်တူတူပြန်မြင်ချင်နေတဲ့Drama Couple(၇)တွဲ သူတို့ဟာအရင်ကအလုပ်တူတူလုပ်ခဲ့ပီးK-Drama Fan တွေကိုကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေချန်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။မရေမတွက်နိုင်တဲ့ဇာတ်ညွှမ်းဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပီးနှစ်တိုင်းအောင်မြင်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်တင်မကပဲသူတို့ရဲ့co-star တွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့chemistry ရှိတယ်ဆိုတာလဲပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီDrama Couple(၇)တွဲကတော့အထင်ကြီးလောက်တဲ့Chemistry တွေနဲ့ပရိတ်သတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာမို့ဒီအတွဲတွေကိုFan တွေကနောက်တစ်ခေါက်တူတူပြန်မြင်ချင်နေကြပါတယ်။ Ji Changwook & Girls’ Generation’s YoonA – ‘The K2’ Kim Yoojung & Yeo Jingoo – ‘Moon Embracing the …
K-Drama Fan တွေနောက်တစ်ခေါက်တူတူပြန်မြင်ချင်နေတဲ့Drama Couple(၇)တွဲ Read More
Kim Jong Kook နဲ့အတိတ်ကRelationship သတင်းကိုဖြေရှင်းခဲ့တဲ့Yoon Eun Hye ရဲ့Agency အရင်တုန်းကသူတို့(၂)ယောက်ဟာSBS ရဲ့variety program ဖြစ်တဲ့“X-Man” မှာပါဝင်ခဲ့ကြပီးဒီshow ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့“love line” couple ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မေလ(၁၇)ရက်နေ့တုန်းကYoon Eun Hye ဟာသူမရဲ့Youtube channel မှာvideo တစ်ခုတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီvideo ထဲမှာသူမရဲ့ex ကောင်လေးအကြောင်းကို“ယောကျာ်းတွေအများစုကအစပိုင်းမှာmessage တွေအများကြီးပို့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါmessage တွေဟာပိုပိုနည်းလာတယ်။စာပို့တာတွေအဆက်အသွယ်တွေနဲလာတဲ့နောက်မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရပေမဲ့ဝမ်းနည်းရတယ်။နောက်ပိုင်းတော့ရှေ့ဆက်ဖို့ခက်လာတာပါပဲ” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူမကဆက်ပီး“ကျွန်မကသူပို့တဲ့message …
Kim Jong Kook နဲ့အတိတ်ကRelationship သတင်းကိုဖြေရှင်းခဲ့တဲ့Yoon Eun Hye ရဲ့Agency Read More
Hyun Bin နဲ့လက်ထပ်ပီးနောက်ပထမဆုံးအကြိမ်IG မှာပုံတင်ခဲ့တဲ့Son Yejin မေလ(၁၉)ရက်နေ့ကSon Yejin ကသူမရဲ့IG ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပီးပုံတွေတင်ခဲ့ပါတယ်။Caption မှာတော့“မနေ့ညကအချိန်နဲ့အမှတ်တရတွေ။ကောင်းသောနေ့လေးမှာကောင်းသောအခိုက်အတန့်လေး” ဆိုပီးရေးခဲ့ပါတယ်။ ပထမပုံမှာတော့သူမနဲ့သူမရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကမီးပုံကိုဝိုင်းပီးထိုင်နေကြတာပါ။ဒီပုံထဲမှာတော့Hyun Bin ကိုမတွေ့ရပါဘူး။နောက်တစ်ပုံကမီးပုံပွဲကိုzoom ဆွဲပီးရိုက်ထားတာပါ။ Source:Kstarlive
Hyun Bin နဲ့လက်ထပ်ပီးနောက်ပထမဆုံးအကြိမ်IG မှာပုံတင်ခဲ့တဲ့Son Yejin Read More